အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း ~ The ICT.com.mm Blog
ICT.com.mm မှ ရောင်းချပို့ဆောင်ခြင်းများကို ခေတ္တယာယီ ပိတ်ထားကြောင်း။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ယနေည ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်စာအမှတ် ၁၀၇/၂၀၂၀ အရ ကျွန်တော်များ အိုင်စီတီအွန်လိုင်းစတိုးမှ Team ICT.com.mm အဖွဲ့သားအားလုံး ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက် (တနင်္လာနေ့) မှစ၍ နောက်ထပ်အမိန့်စာ မထွက်မချင်း ခေတ္တခဏ ရုံးပိတ်ထားပြီး နေအိမ်မှ အလုပ်လုပ်နေကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
မှာယူထားသည့်အော်ဒါများအားလုံးကိုလည်း ICT.com.mm မှ စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းပေးထားမည် ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ထပ်မံကြေညာချက်ပေါ် မူတည်ပြီး ပို့ဆောင်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
ICT.com.mmမှ ရောင်းချပေးနေသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သိရှိလိုပါက ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ အီးမေးလ်ဖြင့် ပို့ပေး၍ရသော Gift Codes, Softwares အစရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
0942 000 4551
0942 000 4552
0942 000 4553
Facebook Customer Chat:
As per the announcement from the Ministry of Health & Sports, ICT.com.mm’s office and delivery services will close temporarily from September 20, 2020.All orders will be on hold until the further announcement from the ministry. However, Team ICT.com.mm will be working from home and ready to answer all your questions as always about products, services, orders, and other information as arise.ICT.com.mm will continue email delivery as always for products like iTunes Gift Codes, Softwares Activation Codes, et cetera.Thank you for understanding in advance.
Newer အော်ဒီယိုဝါသနာအိုးတွေအတွက် Edifier ဆောင်းဘားတွေ၊ စပီကာတွေ စက်တင်ဘာပရိုမိုးရှင်း
Older ၃၁% အထိ discount ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ Super Sunday